Andriamanitra ao amin' ny jodaisma - Wikipedia
Andriamanitra ao amin' ny jodaisma, sahala amin' ny finoan' ny fivavahana abrahamika hafa, dia ilay fisiana ambony indrindra, tokana, mpamorona ny zavatra rehetra ary loharanon' ny zavatra misy rehetra. Vokatry ny sitrapon' Andriamanitra no nampisy an' izao tontolo izao tamin' ny namoronany azy, ka noho izany dia Andrimanitra no tompon' izao rehetra izao. Tsy mifangaro amin' izao tontolo izao sady ambonin' izao tontolo izao (mihoa-draha) Andriamanitra. Tokana sy manan-tsitrapo manokana izy. Tsy misy noho izany zavatra eto amin'izao tontolo izao azo anehoana an' Andriamanitra, ho fanompoan-tsampy izany raha izany no atao.
I IHVH na YHWH (hebreo: יהוה / ihwh) no anaran' Andriamanitra ao amin' ny jodaisma. Tokana ny andriamanitry ny Hebreo, maha saro-piaro azy izany araka ny didy hoe "Aza manana andriamani-kaha fa izaho ihany". Ny Tanakh, Baibolin' ny jodaisma no loharano ahafantarana ny amin' Andriamanitra ho an' ny Jiosy.
Araka ny Baiboly dia misy ampahan' ny toetran' Andriamanitra azo tarafina amin' ny toetran' ny olombelona noho ny nahariany ny olombelona tahaka ny endriny. Ao amin' ny Tanakh dia voalaza fa manam-pihetseham-po Andriamanitra: tezitra, faly, malahelo, diso fanantenana, mitsetra, mitia, na mankahala koa. Inoana koa fa Andriamanitra hendry, marina, mpamidra fo, mahatoky ary velona izy. Andriamanitra mpanjaka sy mpitsara ary miandry ny olony sahala amin' ny mpiandry ondry izy. Sarotiny izy amin' ny fitondran-tenan' ny mpanompony. Nanao fanekem-pihavanana tamin' ny vahoakany, dia ny Zanak'i Israely, izy.
Ny teôlôjian' ny jodaisma dia apôfatika: tsy miseho manontolo fa amin' ny ampahany Andriamanitra tamin' ny fotoan' ilay roimemy mirehitra (Eksôdôsy 3.13-14) raha nanonona ny anarany izay tsy hay tononina ao amin' ilay fehezanteny hoe: אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה / Ehieh Asher Ehieh. Sady tokana izy no tsy azo fantarina (Isaia 40.25). Tsy azo fantarina afa-tsy amin' ny alalan' ny fandinihana ny Tôrah sy ny heviteny momba izany Andriamanitra, ary amin' ny alalan' ny fanajana ireo didy (מִצְווֹת‬ / mitsvot).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andriamanitra_ao_amin%27_ny_jodaisma&oldid=1038125"
Voaova farany tamin'ny 26 Septambra 2021 amin'ny 14:39 ity pejy ity.